ပစ္စည်းကိရိယာ - ဟန်ကျိုး Jinding လူမီနီယမ် Co. , Ltd မှ
Guoxin, High-တိနှင့်အတူ processing လူမီနီယံအလွိုင်းများနှင့်မြင့်မားသောတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတို့အားဤသို့သောအလူမီနီယံအလွိုင်းစာရွက်အဖြစ်အဲဒီ anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးလူမီနီယံအလွိုင်းထုတ်ကုန်, 1000 စီးရီးထဲကနေကိုဖန်ဆင်းနိုင်သည့်လူမီနီယံအလွိုင်းဘားနှင့်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်း, 2000 စီးရီးဆက်ကပ်အပ်နှံထားပြီး , 3000 စီးရီး, 4000 စီးရီး, 5000 စီးရီး, 6000 series နှင့်ကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုလေယာဉ်တင်ပစ္စည်း, ရေနံတူးဖော်ကိရိယာများ, စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည့် 7000 စီးရီးလူမီနီယံအလွိုင်း,
Guoxin များ၏ processing စွမ်းရည်မီးဖို, extrusion စာနယ်ဇင်း, အအေးအပြောင်းအလဲနဲ့ devices များနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများအရည်ပျော်, လူမီနီယံအလွိုင်း ingot သတ္တုများပုံသွန်းစက်အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစွာအရည်အချင်းပြည့်မီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
နည်းပညာ Center က
Guoxin Qinghai အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာရေးစင်တာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားပြီးသည့်နည်းပညာကိုအလယ်ဗဟို (ဗဟိုဓာတ်ခွဲခန်း), ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အမေရိကားကနေ optical ထုတ်လွှတ် spectroscopy နှင့် plasma Spectrometer အပါအဝင်စမ်းသပ်ကိရိယာများပြည့်စုံတစ်စုံ, အင်္ဂလန်ကနေ Atomic Absorption Spectrophotometer, Carl Zeiss, Shimadzu ကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ tester, နှင့်ခြားကနေ metallographic ဏုနှင့်ပုံရိပ်ကို Analyzer တပ်ဆင်ထားကြပါပြီ ဣသရေလအမျိုးမှအပိုင်းတိုင်းတာခြင်းစနစ်။
ဒီနည်းပညာကိုအလယ်ဗဟိုကထောက်ပံ့, Guoxin စသည်တို့ကိုလူမီနီယံအလွိုင်းပိုက်, လူမီနီယံအလွိုင်းပြား, လူမီနီယံအလွိုင်းချောင်းနှင့်လူမီနီယံအလွိုင်း profile များကိုကြောင့်ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, microstructure စစ်ဆေးခြင်း, ငါတို့လူမီနီယံအလွိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများစမ်းသပ်မှုပို့ချအတွက်စွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမီနီယံအလွိုင်းထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်, Guoxin အသစ်သောထုတ်ကုန်အသစ်များကိုနည်းစနစ်နှင့်အသစ်ပစ္စည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးတင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအားနည်းပညာတောင်တရုတ်တက္ကသိုလ်တာဝန်ခံအောက်မှာကြီးနှင့် Guoxin နှင့်အခြား6ယူနစ်များကပူးပေါင်းကောက်ယူသော '' လူမီနီယမ်အလွိုင်းက Short နည်းပညာဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ '12 ငါးနှစ်အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည် ။
2. အထူးကြပ်မတ်လူမီနီယံအလွိုင်းဆွန်း ingot ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လျှောက်လွှာမျိုးစုံအဆင့်ကိုပူထိပ်တန်းသတ္တုများပုံသွန်းစီမံကိန်းကို Qinghai ပြည်နယ်၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနတို့ကလက်ခံနှင့်ပြည်တွင်းဦးဆောင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီပြီးလျှင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြု, တရုတ်၌ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးအတူ။
3. Ingot Casting များအတွက်စီမံကိန်းကို 5083 လူမီနီယမ်အလွိုင်းများ of'Development နှင့်လျှောက်လွှာ '' အမျိုးသားစစ်ဆေးရေးလွန်ပြီနှင့်ပြည်တွင်းဦးဆောင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီတော်မူပြီးမှတစ်ခုဆန်းသစ်အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
Guoxin ရွယ်တူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်, ယခုတိုင်အောင်မသည်ကျွန်တော်ကိုအခြားလယ်ကွက်အကြားသုတေသန, သင်တန်း, ထုတ်လုပ်မှု, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အများအပြားလူသိများတဲ့ကောလိပ်များနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။